'कृपा'मा कुमार बस्नेतदेखि सुशान्त केसीसम्म :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
'कृपा'मा कुमार बस्नेतदेखि सुशान्त केसीसम्म चारवर्षपछि कृपा अनप्लग्डको तेस्रो सिजन सुरू
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज १५
'संगी डुब्दैछु तिम्रो यादमा
संगी मेट्दैछु भाग्य हातमा'
'ब्याच नं. १६' सिनेमाका लागि दस वर्षअघि शिव परियारले गाएको यो पुरानो गीत अब नयाँ स्वादमा सुन्न पाइने भएको छ। मंगलबार साँझ यो गीत युट्युबमा सार्वजनिक गरेसँगै 'कृपा अनप्लग्ड'को तेस्रो सिजन सुरू भएको छ।
स्रोता दर्शकबीच लोकप्रिय भए पनि चार वर्षको अन्तरालपछि मात्र आएको हो, कृपा अनप्लग्ड।
प्रविधिले गीतको शैली र काम गर्ने तौरतरिकामा नै हेरफेर ल्याइरहेको हुन्छ। यसको असर कृपा अनप्लग्ड को नयाँ सिजनमा प्रष्टै देख्न पाइनेछ। कृपा अनप्लग्ड सुरू हुँदा टेलिभिजन 'फर्म्याट'मा थियो। पहिलो सिजन तराई टेलिभिजन र दोस्रो कान्तिपुर टेलिभिजनसँग मिलेर प्रसारण भएको थियो। तेस्रो सिजनमा भने यो सिजनका सबै गीतहरू युट्युबबाट सार्वजनिक हुँदैछन्।
तेस्रो सिजनमा शिवसँगै थप सात गायक/गायिका र पाँच वटा ब्यान्डका प्रस्तुति गरी १३ वटा गीत छन्। यी सबै प्रस्तुति कृपा दृश्य डिजिटलको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुनेछन्। कृपा अनप्लग्डका सिइओ आशिष स्याङ्ग्देनका अनुसार, 'युट्युबबाट सार्वजनिक गरिने भएकोले यस पटक महिनाको पहिलो र तेस्रो साता गरी आगामी छ महिनासम्म तेस्रो सिजनका भिडिओहरू क्रमशः अपलोड गरिनेछन्।'
यो सिजनमा पनि पहिलाकै जस्तो नयाँ तथा पुराना कलाकारहरूको संगम हुनेछ। अनि लोक, पप, रकदेखि र्‍याप विधासम्मका गीत सुन्न-हेर्न पाइनेछ। पुरानो पुस्ताका कुमार बस्नेतदेखि नयाँ पुस्ताका सुशान्त केसीसम्मले संगीत क्षेत्रको पुस्तागत अन्तर झल्काउने छ। यीबाहेक कालीप्रसाद बास्कोटा, रोहितजंग क्षेत्री, बबिन प्रधान, समृद्धि राई, नरेन लिम्बू, अभया सुब्बा, सबिन राई, कन्दरा, द एक्स ब्याण्ड र एएसएम ब्यान्डको प्रस्तुतिले तेस्रो सिजनमा ठाउँ पाउने आयोजक कृपा अनप्लग्डका अपरेटर पाभेल उदास बताउँछन्।
सन् २०१३ मा स्तरीय अडियो स्टुडियो खोल्ने पहलबाट सुरू भएको हो कृपा। इनपुट राम्रो भए आउटपुट पनि राम्रो आउँछ भनेर माइकदेखि मास्टरिङ र मिक्सिङका लागि चाहिने सबै सामान सिंगापुरबाट मगाइएको थियो।
पाभेलका अनुसार, 'उच्च प्रविधि प्रयोगसहितको संगीत कस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेलाई सुनाउने रहर र प्रयासबाट कृपा अनप्लग्डको अवधारणा जन्मेको हो।'
कृपा अनप्लग्ड सुरू भएको समयमा नेपालमा 'अनप्लग्ड शो' नौलो प्रयास थियो। नेपाली स्रोता–दर्शकहरू पाकिस्तानी कोक स्टुडियो र भारतीय एमटिभी अनप्लग्डमार्फत चित्त बुझाइरहेका थिए। कृपा अनप्लग्डले नेपालमा पनि लाइभ रेकर्डिङ र अनप्लग्ड गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा स्थापित गर्यो।
कृपा अनप्लग्ड धरानको 'द अर्थ' ब्यान्डका शिव लामिछानेसँगै शान्ता नेपाली, अमन प्रताप अधिकारीलगायतका संगीत प्रेमीहरूको पहलमा स्थापित भएको प्ल्याटफर्म हो। यसबीच नयाँ तथा पुराना दर्जनौं कलाकारले कृपा अनप्लग्डमा प्रस्तुति दिइसकेका छन्। नयाँ हुन् वा पुराना धेरै कलाकारका लागि यो प्ल्याटफर्मले नयाँ उचाइ दिएको छ। सिजन २ मा शिव लामिछानेका केही गीतहरू समेत सुन्न पाइन्छ।
कृपा अनप्लग्डको मुख्य विशेषता लाइभ संगीत भएकोले पृष्ठभूमिका कलाकारलाई विभिन्न वाद्यवादन बजाएर साथ दिने कलाकारहरूको विशेष हात छ। यस पटकको सिजनमा पर्कसनमा शम्भु बानियाँ, ड्रममा विजय विके, किबोर्डमा प्रदीप श्रेष्ठ र प्रज्वल लामा, बाँसुरीमा रत्न विके, बेस गितारमा सुजित शाही, रिदम गितारमा सुदिप शाही, सारंगीमा मनिष गन्धर्वले साथ दिएका छन्।
यी सबै कलाकारको धुनलाई संयोजन गर्ने काम गितारिस्ट सन्जिब बराइलीले गरेका छन्। सन्जिब सम्झन्छन्, 'पहिलो सिजनमा शम्भुजी, सारंगीवादक प्रिन्स नेपाली र म मात्रै थियौं।'
सिइओ आशिष भन्छन्, 'पहिलोभन्दा दोस्रो र दोस्रोभन्दा तेस्रो सिजनको रेकर्डिङ, ध्वनि र भिजुअलको स्तरसमेत बढाउने गरी मेहनत गरेका छौं।'
पाभेल थप्छन्, 'कृपाले स्रोता दर्शकको परेका छाप पनि कायम राख्दै यो सिजनमा पनि पहिलाजस्तै नयाँ प्रयोगहरू गरिएको छ।'
नयाँ सोच, शैली र प्रयोग कृपा अनप्लग्डको विशेषता हो। अझ, यो नयाँ पुस्ता र पुराना दुवै पुस्तालाई जोड्ने माध्यम पनि हो। कुन्ती मोक्तान, रवीन शर्मा, रामकृष्ण ढकाल, सन्जीव प्रधान, निमा रुम्बा, नवीन के. भट्टराई, राजु लामा, बानिका प्रधान हुँदै नयाँ पुस्ताकी अक्षतासम्मले प्रस्तुति अटाउने प्ल्याटफर्म बनेको छ यो।
अल्बाट्रस, मन्की टेम्पल, द आउटसाइडर्सदेखि नाइट ब्यान्डसम्मका प्रस्तुति यहीँ अटाएका छन्। पुष्पन प्रधान र अल्मोडा राना उप्रेतीजस्ता धेरै सर्जकलाई कृपा अनप्लग्डले नै चिनाएको हो।
पहिलो सिजनदेखि नै जोडिएका सन्जिब भन्छन्, 'कृपा अनप्लग्डमा संलग्न धेरै कलाकारको मार्केट बढ्यो। त्यसैले यो सिजनको लागि पनि सबै पुरानै संगीतकारहरूको समय मिलाउन निकै गाह्रो भयो।' आफूलाई संगीत क्षेत्रमा कृपा अनप्लग्डले नै पहिचान दिएको स्वीकार्छन्।
पाभेल पनि भन्छन्, 'कलाकारको समय मिलाउनु सबभन्दा टाउको दुखाइको विषय बन्यो। व्यस्त भएकैले पहिला काम गरेका केही साथीहरु छुट्नुभयो।'
तेस्रो सिजनको काम यही वर्षको वैशाखदेखि सुरु भएको थियो। कलाकार छान्ने, समय व्यवस्थापन गर्नेदेखि रिहर्सल र रेकर्डिङसम्मको चरणमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म काम गरेको अनुभव कृपा अनप्लग्ड टिमका कलाकारले सँगालेका छन्।
यस पटक भिडियो निर्देशकको भूमिकामा रेशम फिलिली सिनेमाका निर्देशक प्रणव जोशी र सिनेम्याटोग्राफर विदुर पाण्डे पनि जोडिएका छन्।
अनप्लग्ड संगीतमा इलेक्ट्रिक बाजा प्रयोगबिना प्रस्तुति दिने अभ्यास हो। सन्जिब भन्छन्, 'कृपा अनप्लग्डमा हेभी सेटअपमा नभएर सामान्य रुपमै बाजागाजा हेरफेर, आवाजमा इम्प्रोभाइजेसन र लाइभ स्वादले गीत संगीतको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ।'
कृपा अनप्लग्डमा पहिल्यै अर्कै लयमा रुचाइसकिएका गीतलाई नयाँ शैलीमा प्रस्तुत गर्ने काम संगीतकर्मीदेखि आयोजकहरूका लागि समेत चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको अनुभव छ।
पाभेल भन्छन्, 'तर स्रोताहरुले मन पराइदिनुभएकोले हामी यसपटक पनि आशावादी छौं।' यसरी गीत संगीतमा नयाँपन दिने प्रयासमा कलाकारसँगै नेपाली बाजाहरूले पनि विशेष स्थान पाउँदै आएको छ कृपा अनप्लग्डमा।
'लोकमा वेस्टर्न फ्युजनदेखि टेक्नो बिटमा सुनिँदै आएको र्‍याप पनि नयाँ रुपमा सुन्न पाइनु यो सिजनको विशेषता हो,' संयोजक सन्जिब भन्छन्, 'लाइभ साउन्ड रेकर्ड गर्नु कृपाको विशेषता हो।'
कन्दरा समूहका गायक विवेक श्रेष्ठ कृपाकै रेकर्डिंङका लागि अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आएको कुराले आयोजकहरूलाई खुसी बनाउने नै भयो। शिव परियारपछिको नयाँ पुस्तामाझ चर्चा कमाइरहेका सुशान्त केसीको हुनेछ। त्यसपछिका प्रस्तुतिलाई भने 'सर्प्राइज'का रुपमा बिस्तारै सार्वजनिक गर्ने आयोजकको तयारी छ।
प्रविधिको स्तर उन्नतिका फाइदालाई संगीत विधासँग जोड्न पहलका रुपमा सुरू भएको थियो कृपा अनप्लग्ड। कृपाले कानमात्रै हैन, दर्शकको आँखालाई पनि ध्यान दिएको छ। मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या धेरै भएकोले भिडिओमा देखिने रङ पनि मोबाइललाई ध्यान दिएर बनाइएको आशिष बताउँछन्।
यति बेला तेस्रो सिजनका गीतमा स्रोता दर्शकको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भनेर कुरिरहेका छन् कृपा टिमका सदस्यहरू। धेरै कुरामा ध्यान दिइएको भए पनि आशिष र पाभेल उस्तै भनाइ राख्छन्, 'युट्युब फर्म्याट हाम्रो लागि नयाँ हो। युट्युबको ट्रेन्ड बुझ्न गाह्रो छ। उत्साहित त छौं नै, तर नर्भस पनि छौं।'
सबै तस्बिरः कृपा अनप्लग्ड
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १६, २०७६, ०७:१५:००